Ungabhekana kanjani nemiphumela yobudlelwano obunobuthi | Bezzia
Ungabhekana kanjani nemiphumela yobudlelwano obunobuthi
UMaria Jose Roldan | 09/06/2021 22:01 | I-Psychology
Ngeshwa, ubudlelwano obunobuthi busemini futhi akuvamile ukuthi lowo muntu ongakaze ahlupheke ngesinye isikhathi empilweni. Lolu hlobo lobudlelwano lungenzeka emndenini, okomuntu siqu noma emsebenzini. Endabeni yabashadikazi, ukuba nobudlelwano obunobuthi kubangela ukuthi isibopho esidaliwe sibe buthakathaka futhi isimo singase singalawuleki.
Imiphumela kanye nemiphumela yokuba nalolu hlobo lobudlelwano kubi impela, ikakhulukazi maqondana nengqondo noma imizwa. Esihlokweni esilandelayo sizokhuluma ngemiphumela yobudlelwano obunobuthi nokuthi ungabunqoba kanjani.
1 Iyini imiphumela yobudlelwano obunobuthi
2 Okufanele ukwenze ngemuva kokuqeda ubudlelwane obunobuthi
Iyini imiphumela yobudlelwano obunobuthi
Ukuba nobudlelwano obunobuthi nomunye umuntu kubi kulowo mbhangqwana futhi imiphumela ingaqhubeka ngokuhamba kwesikhathi yize ubuhlobo bunqamuka. Isimo somqondo nesingokomzwelo sabantu abaningi silinyazwa ngendlela ebucayi futhi engathi sína kakhulu.
Ezimweni eziningi umuntu oke wahlupheka futhi wezwa ubuhlobo obunobuthi uba nemiphumela emibi kakhulu njengokukhathazeka, ukudangala, noma ukuzethemba okubhujisiwe. Lolu hlobo lwe-sequelae luthinta ngqo isimo sengqondo somuntu. Uma la ma-sequelae engaphathwa ngendlela efanele, umuntu obahluphayo angahlakulela ubuthi obugcina bulimaze ubudlelwane bakusasa nabanye abantu.
Into yokuqala umuntu okufanele ayenze ukubona ngokuqinisekile ukuthi basebudlelwaneni obunobuthi futhi lapho-ke kubalulekile ukushiya ubudlelwano obunjalo ngokushesha okukhulu. Kodwa-ke, isinyathelo esibaluleke kunazo zonke ukubhekana ngendlela enhle nemizwa nemizwa ehlukahlukene enobuthi.
Okufanele ukwenze ngemuva kokuqeda ubudlelwane obunobuthi
Endabeni yokushiya ubudlelwano obunobuthi, kuhle ukulandela uchungechunge lwamathiphu akusiza ukuthi ube ngcono kuwe:
Thembela kumbuthano wakho wabangane abaseduze nomndeni.
Kubalulekile ukuqhuba ukuzindla okuthile noma ukuphumula ukukusiza ubaleke kuyo yonke leyo micabango emibi.
Kunconywa ukuthatha isikhathi esithile wedwa ngaphambi kokuhlanganyela obunye ubuhlobo.
Uma ubona ukuthi isimo sakho somzwelo asisihle, kubalulekile ukuzibeka ezandleni zochwepheshe.
Kufanele ubeke eceleni umuzwa wecala ongaba nawo futhi bheka kahle phambili.
Kuhle ukuzama ukuthola abangane abasha. ukukusiza ukhohlwe impilo edlule.
Ekugcineni, ukufaka ubuhlobo obunobuthi ehlathini akuyona into elula kunoma ngubani. Kodwa-ke kubalulekile ukwenza njalo, ngoba njengoba ukwazile ukubona imiphumela kanye nemiphumela yobuthi obunjalo ibucayi impela. Ezikhathini eziningi, umuntu othintekile ufaka kumuntu wakhe umuzwa wecala ngezehlakalo ezenzeke ebudlelwaneni. Ukuzigxeka ngakho konke kufanele kugwenywe ngaso sonke isikhathi ngoba kukodwa nje, lo muzwa ungenye indlela yobuthi okumele iqedwe. Ukwelapha i-sequelae engaba khona kubalulekile lapho umuntu othintekile ekwazi ukwakha kabusha impilo yakhe futhi ajabulele uhlobo olunempilo lobudlelwano.
Indlela ephelele ye-athikili: Bezzia » Psychology nezithandani » I-Psychology » Ungabhekana kanjani nemiphumela yobudlelwano obunobuthi
UMassimo Dutti wethula indlu entsha yokushicilela i-SS21: New Edgy